Maalinta: Juun 14, 2017
Dekedda Port Akdeniz waxay jabisay rikoorkii taariikhda dekedda ee Antalya
Port Akdeniz waxay jabisay rikoorkii taariikhda dekeda ee Antalya: Kulan casho sharaf ah oo ka dhacay Port Akdeniz, wakiilo ganacsi iyo maareeyayaasha deegaanka Antalya iyo gobolka ayaa iskugu yimid. Waxay martigelisay iftara iyagoo wakiil ka ah Dekadda Antalya [More ...]
Tilmaamaha dhamaadka ah ayaa laga sameeyey Akkaray
Taabashooyinka dhammaystirka ah ayaa laga sameeyay Akçaray: Tram works, oo ay dhistay Kocaeli Metropolitan District, ayaa gaadhay heer ugu dambeeya. 16 bishii Juun jimcihii ka dib dhammaystirkii taabashooyinka ee tareennada taraafikada halkaasoo tijaabooyinka tijaabada laga sameeyay [More ...]
Madaarka Saddexaad wuxuu yeelan doonaa xarun ammaan oo 54 ah
Masaafada 54 ee garoonka saddexaad ee duulimaadku waxay noqon doontaa: Boqolkiiba 52,5 ee dhismaha garoonka cusub ee Istanbul, kaas oo dhismihiisu noqon doono kan ugu weyn adduunka markii heerarkoo dhan la dhammeeyo, [More ...]
Bangiyada bangiyada ayaa la jaray!
Xitaa iyada oo loo marayo magaca öncelikli wagon mudnaanta koowaad ee rakaabkeenna haweenka ılar, waxay bilaabeen inay ka hirgeliyaan naqshad deggan magaalada Bursaray. Qof walbaa waa ogyahay sida maskaxdoodu madow tahay. Tallaabooyinka ugu dambeeya ayaa la ogaaday. Qaamuusyada, macnaha midka kale waa haweeney. [More ...]
Calaamadaha Khatarta ah ee aan ku xirnayn Karin-Karaman High Speed ​​Underground
Konya-Karaman NWT oo aan dhameystirneyn ayaa kahadlay Danger Bells: Daraasadaha Konya-Karaman YHT sababtuna tahay dhibbanayaasha daba dheeraaday ee xaafada Çomaklı waxay rabaan in lasoo gabagabeeyo sida ugu dhaqsaha badan goobta dhismaha. Sare ayaa laga dhigayaa inta udhaxeysa Konya iyo Karaman [More ...]
RayHaber 14.06.2017 Warbixinta Shirka
Shaqada Telescopic Articulated Shaati ayaa la iibsan doonaa (TÜDEMSAŞ) Shaqada bulaacadaha waa la sameyn doonaa Aliminothermite Qalabka Saqafka Alxinothermite Qalabka Fidinta ee Kayseri-Sivas-Divriği Qalabka Digniinta Mashiinka waxaa lagu sameyn doonaa Heerarka Isugeynta Mashiinka Digniinta Mashiinka Digniinta udhaxeysa Isgoysyada Kemah-Erzincan-Kars [More ...]
Jawaab celinta gawaarida: Waxaan la nimaadnaa guduudahayaga guduudan oo loogu talagalay guntooda casaaniga ah
Magaalada Bursa, haweenku waxay muujiyaan jawaab celintooda #WomenDHa aqbalin dumarka ka soo horjeedka dhaqamada galmada. Shirkadda gaadiidka xamuulka ee Bursa Metropolitan Municipal oo la keenay wadooyinka tareenka ee dumarka 'Burulaş' la siin doono mudnaanta 'codsiga wagon ayaa wali jawaab ka bixinaya. Haweenka [More ...]
Diiwaanka Iibka ee Maalmaha Buugga ee Haydarpaşa Station: 9 waxaa soo qabanqaabiyay degmada Kadıköy. Maalmaha Buugga Kadikoy way dhammaadeen. Kumaan kun ayaa booqday buugaagta Maalmaha 325. 2 milyan oo buugaag ayaa la iibiyay. 114 wareysiga iyo aqoon isweydaarsiga [More ...]
Waaxaha Meeleynta waa la bedelay
Waaxyada Ballamada ee Meelaha Waxbaridda la Bedelay: Joornaalka joornaalada ah ee Wasaaradda Waxbarashada Qaranka (MONE) ayaa la daabacay bishii Juun. Waxaa jiray isbedelo aad u muhiim ah joornaalka. 22 waa mid ka mid ah qaybaha ugu weyn ee wax lagu barayo qalinjabinta. [More ...]
Ka shaqee Karamanda Larende Hoose
Shaqo ayaa ka socda Larende Underpass ee Karaman: Iyaga oo kaashanaya Dawlada Karaman iyo TCDD, 100. Wadada sanadka iyo khadka tareenka [More ...]
Ogeysiiska Qaadashada: In lagu iibsado Susa kala duwan (TÜLOMSAŞ)
Turkey tareenka iyo Engine Industry Inc. Mawduuc ku Saabsan Qaanuunka iyo ISSUES OO LA XIRIIRA XIDHIIDHKA QODOBKA 1- Warbixin ku Saabsan Qandaraaslaha 1.1. Magaca Maamulka Ganacsiga: a) Magaca [More ...]
Agaasinka Guud ee Wadooyinka Tareenka ee Waddanka Turkiga (TCDD) Iibsiga iyo Xakamaynta Kaydka Maaraynta 2017 Sanadka Shaqada Dayactirka ee Afyon-Karakuyu iyo Alsancak-Eğirdir Khadadka Hawlaha Dadweynaha Maya: 4734 [More ...]
Mashiinka Xaragada ee Dusha leh ee loo yaqaan 'Stone Beam Scissors' Dhismaha dhismaha tayada leh ee TCDD 6. MACLUUMAADKA TILMAAMAHA TCDD 6 Agaasime Goboleed 45 oo ku yaal Meelo Kala Duwan 49 E1 Tareenka Isku-darka ah ee Isku-dhafka ah ee Hurdada Mashiinka Dhismaha Ferris 4734 [More ...]
Mashiinka Xamuulka ee Isku-tallaabta Dambaska Dusha sare ee maqasyada Ferrous Work TCDD 6. MAAMULKA TILMAAMAHA TCDD 6 Agaasime Goboleed 35 E60 1 EXNUMX RAIL CONCRETE SHARCIYADA XARUNTA [More ...]